သွားရေး လာရေး လွယ်ကူဖို့ ၊ TranLink ကို သုံးကြစို့
Home	Bus Line	Today Bus	Ticketing Agents & Hotels	About Contact UsHelpHow to Buy
- All Buslines- Elite Express Public Co. Ltd.
Moe Kaung Kin Express
MSCT PTE LTD
Myanmar Oo Paing Ltd
Yoe Yoe Lay
- All State/Division - Bago Division (ပဲခူး)
Magway Division (မကွေး)
Mandalay Division (မန္တလေး)
Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)
Shan State (ရှမ်း)
Yangon Division (ရန်ကုန်)
- All Township - Ahlone (အလုံ)
Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)
Dagon Myothit - Seikkan (ဒဂုံမြို့သစ် - ဆိပ်ကမ်း)
Dagon Myothit - South (ဒဂုံမြို့သစ် - တောင်)
Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)
North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ)
Pobbathiri (ပုဗ္ဗသီရိ) Pyigyitagon (ပြည်ကြီးတံခွန်)
South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)
Zeyarthiri ( ဇေယျာသီရိ) ချမ်းမြသာစည်
Search Reset	No	Agent Name	Contact No	State/Division	Township	Address	1	ရွှေမင်္ဂလာခရီးသွားဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း	095300171	Bago Division (ပဲခူး)	Bago (ပဲခူး)	အမှတ်(23/ခ)၊မင်းလမ်း၊အဝေးပြေးဟောင်းလမ်းဆုံအနီး၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ပဲခူးမြို့	2	U Hla Po	09780882133	Magway Division (မကွေး)	Pakokku (ပခုက္ကူ)	ပခုက္ကူ အဝေးပြေးကားကြီးကွင်း၊အနောက်ဖက်တန်းမြောက်ထိပ်၊အ၀င်ဝ။ပခုက္ကူမြို့။	3	19လမ်း-ဦးကိုကိုလေး	0991003953	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	19 လမ်း ၊ 87 လမ်းကြား ၊မန္တလေးမြို့ ။	4	A Little Travel	0943016110	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	Ostello Bello Hotelရှေ့၊လမ်းမတော် ပုဂံမြို့သစ်။	5	Asia 09402794929	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	66×67 ၊မနော်ဟရီလမ်း၊ မြနန္ဒာဈေးတိုက်ခန်း၊ အခန်း(15) မြို့သစ်၊ မန္တလေးမြို့။	6	Aung Maung	09420100359	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အမှတ် (173) (8) ကွက်၊ (11) လမ်းထိပ်၊ မန္တလေးလာရှိုးလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	7	Bagan Time Money Changer	09444004038	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	စံပယ်လမ်း၊ ရွှေလောင်းရပ်ကွက်၊ ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ် ၊ အရှေ့ဘက် ၊ ပုဂံမြိုသစ် ။	8	Baganvisitor Travel Media	09779943622	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	သီရိပစ္စယာတိုးချဲ့ (5) ၊ညောင်ဦးမြို့။	9	Best Information	09402745481	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ဆုံကုန်းရပ်၊ညောင်ဦးမြို့။	10	Capt: Zaw Zaw Oo	09403719292	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	ပြင်ဦးလွင် သီရိပဒေသာကားကြီးဝင်း	11	Ciccio Bello 09402731903	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပုဂံမြို့သစ်၊ဧရာဝတီမီနီဘဏ်ခွဲိအနီး။	12	CIty Mart	09259112116	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	စက်မှုပန်းခြံကွေ့ ဘယ်ဘက် မန္တလေးမြို့	13	Columbus Travel	092042371	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	Main Road , BAGAN.	14	E.I.B	09975035120	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	25လမ်း၊ 83× 84 လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။	15	Easy Go Travel 095068857	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	35 Street , 82x 8 Street ,Chan Aye Tharzan Township, Mandalay .	16	Elite Station Mandalay 30th Street Gate	09977838227	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	30အမှတ်(က/၁၃၈)၊ လမ်း(၃၀) ၊ ၈၂ x ၈၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။	17	Elite Station Mandalay Kyay Sael Kan	09977838224	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyigyitagon (ပြည်ကြီးတံခွန်)	အခန်းအမှတ် F4, F5 ၊ (၇၈) လမ်း၊ ၇၇ x ၇၄ လမ်းကြား ကျွဲဆည်ကန်အဝေးပြေးကားဝန်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၊ မန္တလေး။	18	Elite Station Pyin Oo Lwin	09977838180	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အခန်းအမှတ် (A/2) သီရိပဒေသာကားကြီးဝင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။။	19	Elite Station Pyin Oo Lwin 2	09977838182	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အမှတ်(၂)၊ ၁၂-လမ်းထိပ်၊ ဟံသာစတိုးအနီး၊ မန္တလေး- လားရှိုးလမ်းမကြီးဘေး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	20	Ever Sky Information	09402774481	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	Thiripyitsaya Block ,No (5) ,Near Zfreeti ., Nyaung Oo .	21	Excel Tickets	092057485	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	အမှတ်(102) ၊ 28 လမ်း၊ 75×76 လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာဇံ၊ မန္တလေးမြို့။	22	Family	09797777064	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	88လမ်း၊23×24လမ်းကြား သီရိမာလာအရှေ့ရပ်ကွက် (189)အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ ။	23	For Green	09259523310	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	လမ်းမတော်၊မေခလာတည်းခိုခန်းဘေး၊ညောင်ဦးမြို့။	24	Forever Information & Ticketing Service	09795953932	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပုဂံညောင်ဦးလမ်းမကြီး၊ တိုက်ကုန်း ၊ A-1 တည်းခိုခန်းအနီး ၊ညောင်ဦးမြို့။	25	Friend	09256080348	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပုဂံမြို့သစ်၊လမ်းမတော်၊ပုဂံဈေးအနီး။	26	Friends	0991041337	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	၁၉ လမ်း၊ ၆၃x၆၄ ကြား၊အောင်မြေသာစံ၊ မန္တလေးမြို့။	27	Golden Safari ( ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ) 09797571765	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	41လမ်း ၊90×91 ကြား၊ အကွက်(404) ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။	28	Golden Star	09402753255	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပြည်တော်အေးရပ်ကွက်၊အနော်ရထာလမ်း၊ညာင်ဦးမြို့။	29	Great 09799178446	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	D.S.A အမှတ်( 232/3) ၊စစ်တက္ကသိုလ်ဝင်း၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်။	30	Green and Green Travels & Tours	0943035188	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	Thiripyitsaya (4) words ၊ Nyaung Oo. အမှတ်(456) 81 လမ်း၊ 32x 33 လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။	31	Happy Myanmar	09259045390	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	38 လမ်း၊ 85× 86 ကြား၊ မန္တလေးမြို့။	32	i SEA Co.,Ltd	092052005	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	No (542) လမ်း 80 ၊ 35×36 ကြား၊ မန္တလေးမြို့။	33	K.S.M (သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်း)	092044766	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	မန္တလေး-လာရှိုးလမ်း (စိန် ကိတ်မုန့်တိုက်ရှေ့)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	34	Ko Myo Travel	09402753365	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	တောင်ဘီရွာ၊ ပုဂံမြို့ဟောင်း၊ သရပါ(3) ထမင်းဆိုင်အနီး။	35	Life Station	0933858367	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ယွန်းမြို့သူဟိုတယ်အနီး၊ပုဂံမြို့။	36	Lucky Seven Guest House	09421153668	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	လမ်းမတော်၊ဆုန်ကုန်းရပ်၊အမှတ်(4) ရပ်ကွက်၊ညောင်ဦးမြို့။	37	Made Myanmar 092026231	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	လမ်း(80)(9x10) ကြား၊အောင်မြေသာဇံ/မန္တလေးမြို့။	38	Marvelous Three Travel & Tours	092014526	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	62 လမ်း ၊ 36×37 လမ်းကြား၊No-5ဇ၊ချမ်းအေးသာဇံ၊မန္တလေးမြို့။	39	Memory	092043579	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ညောင်ဦးမြို့၊သီ၇ိပစ္စယာအမှတ်(4)နယ်မြေ။	40	Morning Star	09402648219	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ဆုံကုန်းရပ် ၊ လမ်းမတော် ၊ ညောင်ဦးမြို့ ။	41	Myat Yadana(Myo KoKo)	092220900	Mandalay Division (မန္တလေး)	Kyaukpadaung (ကျောက်ပန်းတောင်း)	ရန်ပြည်မန်းလမ်း၊ဈေးကွက်သစ်ရက်၊ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။	42	Nge Nge	09402672465	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	38လမ်း၊ 88လမ်းထောင့်၊ မန္တလေးမြို့ ။	43	Normal 0943061127	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	အကွက်(373) ၊ ထင်းဝင်းရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ ။	44	Nwe Light	09789499043	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	A-9 / နွယ်နီလမ်း၊ သမုဒ္ဒရာဇ်၊ပုဂံမြို့။	45	Precious Myanmar Travel And Tour	09968822982	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	(518) ရာဇသင်္ကြန် (1) လမ်း ၊ ယာခင်းသာဟိုတယ် အနီး ၊ သီရိပစ္စယရပ်ကွက် (5) ၊ ညောင်ဦးမြို့ ။	46	Royal Asia ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပ လေယာဉ်လတ်မှတ် နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှူလုပ်ငန်း	09402568549	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mogoke (မိုးကုတ်)	အခန်း (B718) ၊ မဟာမုနိအရှေ့ ဘက်တိုက်တန်း၊ ပန်းခြံထာပွဲအနီး၊ မိုးကုတ်မြို့။	47	Seven Diamond Travels & Tours Co.,Ltd	095179993	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပုဂံညောင်ဦးမိန်းလမ်း၊ ရေ၀င်ရပ်၊ ညောင်ဦးမြို့။	48	Shine	09962039081	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	11လမ်း× 12 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့။	49	Snow (Ticketing ) 09423724042	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	မြို့လယ်ဘုရား အနီး ၊ Kaday Aung Hotel လမ်း ၊ ပုဂံမြို့သစ်။	50	Star Zone Travels & Tours	095019555	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	31 Street ၊ Bet 80 & 81 Street ,Chan Aye Tharzan Tsp, Mandalay.	51	Summit Mandalay	092025862	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	အမှတ်(693) ၊ 82 လမ်း ၊ 44 × 45 လမ်း ကြား၊ မန္တလေးမြို့ ။	52	Sweet Day Travel & Tour	09251166112	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	No မ-32/73 ၊ 57 လမ်း ၊ ၊ 41×42 ကြား၊ ရဲမွန်တောင် ၊မန္တလေး ။	53	Tapkone-NPT	09420115179	Mandalay Division (မန္တလေး)	Tatkon (တပ်ကုန်း)	Lamataw,Tapkone	54	Taw Win 77	09454558720	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	77 လမ်း၊ 34× 35 ကြား ၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။	55	Treasure Queen 09402504256	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ကွက်သစ်၊ ညောင်ဦးမြို့ ။	56	U Zaw Travels @ Tours	09256368823	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	H/7, Khaulaung Anawrahda Quarter , Bagan.	57	View Point	09782043096	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	အနော်ရထာလမ်း၊ဘုရားနီအနီး၊ညောင်ဦးမြို့။	58	Wai Yan Ticketing & Tour Reservation	092040139	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	အမှတ်(7 ) ရပ်ကွက်၊ ၀က်ကြီးအင်း၊ ညောင်ဦးမြို့၊။	59	We Stay Hotel	09977265522	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	တောင်ဘကျေးရွာအနီး ၊ ညောင်ဦးမြို့ ။	60	Yadana Win T & T	09788488288	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	Mandalay	61	Zaw Oo Lwin	09423724042	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	Ostello Bello Hotel ရှေ့၊ပုဂံမြို့သစ်။	62	Zaw Transport	09256368823	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပုဂံမြို့သစ်၊ဆန်းဟောင်းရပ်၊အနော်ရထာလမ်း။	63	ကိုမင်းမင်း ကားလတ်မှတ်အရောင်းဌာန	092225832	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	အဆောင်(5) အခန်း(5) ၊ကန်တော်ကြီးတိုက်တန်း၊ မန္တလေး၊ 86 လမ်း။	64	ကိုဌေး	096809644	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	32 လမ်း ၊ 82 X 83 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့	65	ကိုငယ်ငယ်	09402683002	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	c-65, ပုန်းညက်လမ်း၊ ထီးမင်းယဉ်ရပ်၊ ပုဂံမြို့။	66	ချမ်းမြေ့မွန်	09255920068	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyigyitagon (ပြည်ကြီးတံခွန်)	တံခွန်တိုင်၊ ဈေးတန်း ၊ မန္တလေးမြို့။	67	ချမ်းမြေ့သူ	092045735	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	12 လမ်းထိပ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး (2) ၊ဥာဏ်တော်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ။	68	ငုဝါ	0260158	Mandalay Division (မန္တလေး)	Amarapura (အမရပူရ)	လမ်း 30 ၊ 70 X 71 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့	69	စခန်းသာ လတ်မှတ်အရောင်း။	09402545874	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	ရိုးမဘဏ်ဘေး ၊ စခန်းသာဂိတ်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ။
15လမ်းထိပ်၊ ရွှေကြည်တည်းခိုခန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ရွှေဝမ့်ဝမ့်ဘီယာဆိုင်ဘေး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	70	စန်းငွေရောင်	0991006720	Mandalay Division (မန္တလေး)	Amarapura (အမရပူရ)	32 လမ်း ၊ 82 X 83 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့	71	စမိုင်းလ်မန်းမြို့တော်(1)	09777777092	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	ဂေါ်သဇင်လမ်း 62/64 လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့၊။	72	စံ	09782042730	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	အ.ထ.က ကျောင်းလမ်း၊ကျော်စွာရပ်၊ပုဂံမြို့သစ်။	73	စံထက်	0933200967	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	68 လမ်း ၊ဒေလီရာလမ်းနှင့်ဇလပ်ဝါလမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့	74	စံပ္ပါယ်စိုး	09797735951	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	မိုင် 30 ၊2ဖာလုံ ၊တ.လ.အ တပ်ပေါက်အဆင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို။	75	ဇွန်မိုးစံ	09402549919	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	လမ်း 80၊ 34 × 35 ကြား၊ မန္တလေးမြို့။	76	တစ်သုံးလုံး	09798777268	Mandalay Division (မန္တလေး)	ချမ်းမြသာစည်	လမ်း 40 ၊ 82×83 လမ်းကြား ၊ မန္တလေးမြို့ ။	77	တိုးဒီမြန်မာ	092031741	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	23×24လမ်းကြား၊88×89လမ်းကြား၊စံပယ်ဆောင်အခန်း(1) မြေညီထပ်၊အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။	78	ထက်လင်း ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း	0943178855	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	YMCA တိုက်တန်း ၊ဈေးလေးမီးပွိုင့် ၊ပြင်ဦးလွင်။	79	ထက်အာကာ ကားလတ်မှတ်အရောင်းဌာန	09402600736	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	လမ်း 80၊ 36×37 လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။	80	ထက်ရွှေစင်	0943061297	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	32 လမ်း၊ 82×83 ကြား၊၊မန္တလေးမြို့။	81	ထက်မြတ် လတ်မှတ်ရောင်း	09797782230	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ရွှေစည်းခုံ ဂိတ်ဟောင်း၊ ညောင်ဦးမြို့ ။	82	ထွန်းတောက်အောင်	092012041	Mandalay Division (မန္တလေး)	Amarapura (အမရပူရ)	၂၃ လမ်း၊ ၈၇x၈၈ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။	83	ဒီနိုင်းခ ကားလတ်မှတ် အရောင်းဌာန	09975308076	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	အမှတ်(455) , 29×82 လမ်းထောင့်၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။ မန္တလေးမြို့။	84	နန်းဘရဏီ	092009739	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	68လမ်း၊34×လမ်းကြား ၊မန္တလေးမြို့ ။	85	နန်းရှေ့သူ	0943058943	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	19 လမ်း ၊ 61 လမ်း ၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး ။	86	ပင်လယ်	092015201	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	လမ် ၈၀၊ ၃၅x၃၆ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။	87	ပန်းတော်ဝင် 0943012915	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	ပန်းတော်ဝင်၊ အမှတ်(၁၀၆)၊ အနီးစခန်း၊ နှီးဘုရာကြီးလမ်ခွဲထိပ်၊ မန္တလေး-လာရှိုးလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	88	မင်းသားကြီး	0949203207	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	73 လမ်းမကြီး၊ လေယာဉ်ကွင်းအနီး	89	မသန်းသန်းခိုင်	09259001452	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	သီရိစန္ဒာဟိုတယ်ရှေ့၊ ပုဂံမြို့သစ်။	90	မိသားစု လတ်မှတ်အရောင်း	09256014036	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	36/ 37 လမ်းကြား၊ 72လမ်း ၊မဟာအောင်မြေ၊မန္တလေး။	91	မီဂါမိုဘိုင်း	09777771083	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	အမှတ် ၁၂၉၊ ၂၉ လမ်း ၊ ၈၁ X ၈၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့	92	မျိုးမေတ္တာ 09790173028	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	ကလပ်လမ်း၊ ရ.က.က (9) ။ ပြင်ဦးလွင်မြို့။ 93	မန္တလေးသား	09797380208	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	22x23 ကြား၊ 89× 90 ကြား၊ ၊သီရိမန္တလာကားကွင်းအနောက် ၊ ။ မန္တလေးမြို့ ။	94	ရတနာပုံ	0933312229	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	82 လမ်း ၊ 23 X 24 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့	95	ရတနာသီဟ	09259112116	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	အမှတ်(49)က၊ 73 လမ်း၊ 27x28 ကြား၊ စိတ္တရမတီ	96	ရှစ်သုံးလုံး	092029888	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	လမ်း၊28×29ကြား၊မန္တလေးမြို့။	97	လူထုအလင်း	09402522288	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mogoke (မိုးကုတ်)	လူထုအလင်း၊ အောင်နန်းရပ်၊ မိုးကုတ်မြို့။	98	လပြည့်ဝန်း စတိုး	09790160658	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	မန္တလေး -လားရှိုးလမ်း ၊နာရီစဉ် အနီး၊ ပြင်ဦးလွင် ။	99	သစ်လွင် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း	09400439029	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	ရ.က.က (၇)၊ တောင်ရတနာရပ်၊ အနော်ရထာလမ်းထိပ်၊ ၀င်းပပခြံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	100	သာစံ	0940260074	Mandalay Division (မန္တလေး)	Amarapura (အမရပူရ)	အမှတ်(171/ B) ၊35 လမ်း ၊ 76 X 77 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့။	101	သီဟဗလ 09798977199	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အမှတ်(၁၆၅) ရပ်ကွက်(၁)။ ကုန်သည်လမ်း၊ ရ-က-က )၅)။ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	102	သူရစစ်ဂိတ်ခွဲ 09794050791	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	84 လမ်း ၊ 32×33 ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ။ မန္တလေးမြို့။	103	သံယောဇဉ်	0943163627	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ရွှေစည်းခုံ၊ဂိတ်ဟောင်း။ သံယောဉ်ဇဉ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့။	104	အကယ်ဒမီ	09797400240	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	အမှတ်(295) 83လမ်း ၊30လမ်း နှင့် 31လမ်းကြား၊အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့ ရပ်ကွက်၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေး၊။	105	အိမ်မက်ကမ္ဘာ	09444023253	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	အမှတ်(151) စခ/5 ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ 55×56 ကြား၊ မန္တလေးမြို့ ။	106	အုန်းချော သရဖူဟိုတယ်	09256497216	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အုန်းချော၊ သရဖူဟိုတယ် ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	107	ဦးကျော်အောင် ကားဂိတ်	09400448987	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ညောင်ဦး၊ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းမဘေး၊ထနောင်းဝန်းရွာလမ်းခွဲ။	108	ဦးအောင်ဝင်းမိုး	09796739700	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	သသန ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ။	109	ဥဿာလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရေး	09790228834	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အမှတ်ေ၆၃၊ မန္တလေး-လာရှိုးလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	110	ဧကရာဇ်	09787000045	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	22 လမ်းနှင့် 84 လမ်းဒေါင့် အောင်မြေသာဇံမြို၊့နယ်၊မန္တလေးမြို့	111	ဧဒင်(3)	092042061	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	မြို့မကွက်သစ်၊ ညောင်ဦးမြို့။	112	ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီစက်သုံးဆီ	095121838	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	33 လမ်း၊ 85 လမ်းထောင့်။ မန္တလေး။	113	ကောင်းစံ	0991005844	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	73လမ်း၊34x35 ကား၊မန္တလေးမြို့။	114	ကျော်-ခင်ခင်စု	09402572943	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	မနော်ဟရီလမ်း၊53×54 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့။	115	ကျော်ကမ္ဘာမိတ္တူ	092014073	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	အမှတ် ( 19/19) ၊ကံကော်လမ်းသွယ် ၊ 30× 32 ကြား ၊ 73×74 ကြား ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊မန္တလေးမြို့ ။	116	ငွေကြယ်ဖြူ	092050714	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	လမ်3း0 / 66x68 လမ်းထောင့် မန္တလေးမြို့။	117	ဇေယျာမင်း	09402630714	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ပုဂံမြို့သစ် ၊ဈေးအနီး ၊ ပုဂံမြို့ ။	118	ညောင်ရိပ်မွန်	0991005176	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	38 လမ်း၊86 လမ်းထောင့်၊ဒေးဝန်းအရှေ့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။	119	တော်ဝင်	09977288802	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	No.854 ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊တောင်ရပ်ကွက်၊ဦးပွားဂုံးကျော်အရှေ့ဘက်၊မန္တလေးမြို့။	120	တော်ဝင် လက်မှတ်ရောင်းဌာန	09792772988	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	တော်ဝင် မြန်မာထမင်းဆိုင်၊ ရတနာပုံ တယ်လီပို့ အနီး၊ ပြင်စာပန်းခြံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	121	တော်ဝင်ရေဆင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း	09448143388	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	119/ 24 A,41 street , Between 78th & 79 th , Mahar Aung Myay Township , Mandalay .	122	နေမျိုး (2) 092061711	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	19 လမ်း၊ 62× 63 ကြား၊ မန္တလေးမြို့ ။	123	နောင်ရိုး	09790132321	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	33 လမ်းထောင့် ၊ 81 လမ်း၊ မန္တလေးမြို့	124	ရောင်နီဦး	092052339	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	1×72 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့။	125	ရွှေကံကောင်းလတ်မှတ်အရောင်းဌာန	0943044407	Mandalay Division (မန္တလေး)	Aungmyaythazan (အောင်မြေသာဇံ)	11× 12 လမ်းကြား၊ 78လမ်း ၊ မြောက်ပြင်ထားဝယ်(42) ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။	126	ရွှေခရီး	092009864	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	70×71လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို။	127	ရွှေငုဝါ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု	09258044680	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	မန္တလေး -လားရှိုးလမ်းမကြီးဘေး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ။	128	ရွှေစံပါယ်	09786010799	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	နန္ဒ၀န်ရပ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ မန္တလေး-လာရှိုးလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။	129	ရွှေနဒီဧည့်ရိပ်သာ	09440276545	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	လမ်းမတော် တိုက်ကုန်းရပ်၊ညောင်ဦးမြို့	130	ရွှေနန်းထိုက်	09788250190	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	A-1 , ဘုန်းမြတ်ပိုင်စိုး၊ ကားကြီးဝန်း။	131	ရွှေပင်ဆင့်	09794808330	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	သုံးတောင်ကျေးရွာ၊ ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီးအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
၀၉၇၉၄၈၀၈၃၃၀	132	ရွှေပန်းချီပိုးထည်	09798853878	Mandalay Division (မန္တလေး)	Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)	အမှတ်(34) ၊ A ရပ်ကွက်ကြီး ၊ (4) မန္တလေး ၊ လားရှိုး ၊။	133	ရွှေမင်း	0947117819	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	မနော်ဟရီလမ်း ၊ 66x67 လမ်းကြား ။မန္တလေးမြို့။	134	ရွှေလမင်း	092024710	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanayethazan (ချမ်းအေးသာဇံ)	83×84 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့။	135	ရွှေလမ်းသစ်	09259017606	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	26 လမ်း၊ 64x65 လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။	136	ရွှေလှိုင်း	09402502825	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ကျေက်ပန်းတောင်းကားလမ်းမဘေး၊ရွှေလှိုင်းရွာထိပ်၊ ညောင်ဦးမြို့။	137	ရွှေမြန်မာ	092042064	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	အမှတ်(4) ၊ဆုံကုန်းရပ်၊ညောင်ဦး။	138	အောင်ဇမ္ဗူ	09402542543	Mandalay Division (မန္တလေး)	Mahaaungmyay (မဟာအောင်မြေ)	8×39 လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့။	139	အောင်မြင့်မိုရ်(MDY)	095340683	Mandalay Division (မန္တလေး)	Amarapura (အမရပူရ)	အနီးကပ်ကျော်၊အမရပူရမြို့။	140	မြင့်မြတ်	09797147977	Mandalay Division (မန္တလေး)	Tada-U (တံတားဦး)	တံတားဦးမြို့နယ်၊ မိုင်တိုင် ၃၅၆/၀။ 141	မြတ်သုခ(3) ဆေးဆိုင်	09401639792	Mandalay Division (မန္တလေး)	Chanmyathazi (ချမ်းမြသာစည်)	56 လမ်း ၊ အောင်ပင်လယ် ၊ အောင်ဇေယျာလမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်း ၊ မန္တလေးမြို့ ။	142	၀င်းသစ္စာ	0933104792	Mandalay Division (မန္တလေး)	Kyaukse (ကျောက်ဆည်)	62လမ်း၊64x65 လမ်းကြား၊ မန္တလေး	143	၀င်းသူမြင့်	09402786742	Mandalay Division (မန္တလေး)	Nyaung-U (ညောင်ဦး)	ရွှေစည်းခုံကားကြီးဝင်းအနီး၊ အေးချမ်းမောင်ဂိတ်ဘေးညောင်ဦးမြို့။	144	241 Tours & Other Services 09777888241	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	No(10/108) Bo Gyoke street,Shwe Chi Quarter,Pyinmana Township.
Ph-no.067 24241-09780000241-09777888241	145	ARON Co.,Ltd ( Travel & Tour) 09795549203	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Dekkhinathiri (ဒက္ခိဏသီရိ)	Pa-190,Thapyaegone Pwalyone Town. Nay Pyi Taw.	146	Asia Sailing Travel & Tour	09263658822	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pobbathiri (ပုဗ္ဗသီရိ) ၁၅/၈၇၂ ၊ ရာဇဌာနီလမ်း၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။	147	Aung Kyaw Moe	0973036652	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Zabuthiri (ဇမ္ဗူသီရိ)	တိုက်အမှတ်(4323)၊ အခန်း (15) ၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်။	148	Elite Station Nay Pyi Taw Baw Ga Thiri 09977838711	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	အမှတ်(က/၆၈)၊ ဘောဂသီရိ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းကားဝန်း၊ နေပြည်တော်။	149	Elite Station Nay Pyi Taw Dakhina Thiri Zay	09977838773	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Ottarathiri (ဥတ္တရသီရိ)	အခန်းအမှတ် (က/၁) ဒက္ခိဏသီရိဈေးအဝေးပြေးကားဝန်း ၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၊ နေပြည်တော်။ 150	Elite Station Nay Pyi Taw Myo Ma Gate	09977838771	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Zabuthiri (ဇမ္ဗူသီရိ)	အခန်းအမှတ် (က) ၃၅/၃၇/၃၈ မြို့မဈေးအဝေးပြေးကားဝန်း ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ 151	Elite Station Nay Pyi Taw Thabyay Gone Zay	09977838775	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Zabuthiri (ဇမ္ဗူသီရိ)	အခန်းအမှတ် (က) ၃/၄ သပြေကုန်းဈေးအဝေးပြေးကားဝန်း ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ၊ နေပြည်တော်။	152	Global Way	0943012919	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Dekkhinathiri (ဒက္ခိဏသီရိ)	နေပြည်တော်၊ဒက္ခီဏသီရိမြို့နယ်။ Capital Hyper Market ၊ ဒုတိယထပ်၊။	153	Kyaw Mega Co.,Ltd 0943076921	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Lalway (လယ်ဝေး)	Room NO (104) / Ground Floor , Capital Hypermarket .	154	Man Myanmar Hotel	09797988531	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Dekkhinathiri (ဒက္ခိဏသီရိ)	No. 19, Yaza Thingaha Road, Hotel Zone(1) Dakkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw, 067422591~6,	155	Unique Asia Travels & Tours Co.,Ltd	098623535	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	C-104/Junctiion Centre/Nay Pyi Taw. 156	Wai Phyo	09256311195	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Ottarathiri (ဥတ္တရသီရိ)	ဥတ္တရသီရိ၊သောကလမ်း၊ဇ၀နသိဒ္ဓိရပ်ကွက်။	157	စိန်ဒေါင်း	09962028377	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	No-3/102၊မောင်ခင်လမ်း၊ပျဉ်းမနားမြို့။	158	မီးမီး	09797875338	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Lalway (လယ်ဝေး)	No.5,လယ်ဝေး၊နေပြည်တော်	159	မိုးတိမ်	09420720222	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Zabuthiri (ဇမ္ဗူသီရိ)	ပ၊33၊ပွဲရုံတန်း၊သပြေကုန်း၊ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်။	160	ရတနာမိုး	09421046266	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	ယောက်သွားအင်း။ပျဉ်းမနားမြို့။	161	သစ်တော	09420705162254571814	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Zeyarthiri ( ဇေယျာသီရိ) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊သစ်တောဦးစီးရုံးချုပ်။	162	အိုးဝေ	0973119672	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	No.36/38၊9ထပ်၊Grand Menu Condo မြေနု၊စမ်းချောင်း၊ရန်ကုန်မြို့	163	အနော်ရထာ ( A Naw Ra Htar) 09790144648	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Lalway (လယ်ဝေး)	အမှတ် (4/313) ၊ အမှတ်(4) ရပ်ကွက် ၊ ခန်းမလမ်း(တရားရုံးအနီး )
၊လယ်ဝေးမြို့ ၊နေပြည်တော်။	164	ကောင်းဆင့်	09797633144	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Zabuthiri (ဇမ္ဗူသီရိ)	အမှတ်(2u3F5)၊အခန်း-2၊နေပြည်တော်စည်ပင်အိမ်ရာ။	165	မောင်မောင်ချစ်	0943205080	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Ottarathiri (ဥတ္တရသီရိ)	နေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မင်းကုန်းအုပ်စု၊ ကျွဲရှင်ကျေးရွာ။ အရောက်ပို့ စနစ်ရှိပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ် 09450997060 သို့ ဖုန်းဆက်ပေးပါရန်။	166	ရွှေ	09977919132	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	တောင်ညိုလမ်း၊ဆင်ရုပ်ဝိုင်းအနီး၊ ယောက်သွားအင်းရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။	167	ရွှေစင်စင်္ကြာ/အောင်သီဟ	095051875	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	က/၅ ၊ ရွှေစင်စင်္ကြာ ကားဂိတ်။ ဆင်ရုပ်အနီး၊ ယောက်သွားအင်း။နေပြည်တော်။	168	ရွှေကြက်ဖ	0949206720	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	4/1ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ရွှေချီရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနားမြို့	169	အောင်မောင်းသံ	09250195775	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pyinmana (ပျဉ်းမနား)	ရွှေလက်ပံ့တိုက်တန်း၊ပေါင်းလောင်း၊ပျဉ်းမနား။	170	မြတ်သဉ္ဖာ ဟိုတယ်	09977838089	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pobbathiri (ပုဗ္ဗသီရိ) မြတ်သဉ္ဖာဟိုတယ် ၊ ပုပ္ပသီရိမြို့ပတ်လမ်း၊ပုပ္ပသီရိမြို့ ၊ နေပြည်တော်။	171	ပြည့်စုံဝင်း	09440498987	Naypyitaw (နေပြည်တော်)	Pobbathiri (ပုဗ္ဗသီရိ) ပ္ပသိရီမြို့နယ်၊နေပြည်တော်၊ရွာတော်	172	Panyoma Travel	123456	Other (အခြား)	111 North Bridge Road,
#03-60 Peninsula Plaza,
Singapore 179098	173	Sin Myanmar	123456	Other (အခြား)	111 North Bridge Road, #04-34 Peninsula Plaza, Singapore 179098	174	Soe Tun	94874413	Other (အခြား)	111 North Bridge Road, #05-48 Peninsula Plaza, Singapore 179098	175	AMT	07122458	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ဗိုလ်ချုပ်လမ်း အလယ်ရပ် မုံရွာမြို့	176	Diamond	09259039760	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Myaung (မြောင်)	မြို့အ၀င်လမ်း၊မြောင်မြို့	177	Elite Station Mon Ywa	09977838316	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	အခန်းအမှတ် ၂၂/၂၃ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် ၊ ကားလေးဝန်း၊ မုံရွာမြို့။	178	Golden Sojourner (ရွှေခရီးသည်)	09780482142	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	အမှတ်(၈/၃၈) ၊နှင်းဆီလမ်း၊ဘုန်းစိုးရပ်၊မုံရွာမြို့။	179	Htin Kyaw	07145280	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	ကြယ်စုံထက်ကျော်၊မုံရွာ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ချောင်းဦးမြို့။	180	K.Mart	092130505	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ကျောက်ကာလမ်း နှင့် ရေကူးကန်လမ်းထောင့်၊မုံရွာမြို့။	181	Khaing Thazin	09256311195	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Myinmu (မြင်းမူ)	ဂွေးပင်တောရွာ၊မြင်းမူးမြို့နယ်	182	Kyaw	0949225864	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	မြတ်နိုးသူခေါက်ဆွဲဆိုင်၊မုံရွာ-စစ်ကိုင်းလမ်း	183	Pearl May	09250089208	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	အလယ်ရပ်ဗိုလ်ချူပ်လမ်း၊မုံရွာမြို့	184	Point	0940001934	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	ချောင်းဦးပွိုင့်၊ချောင်းဦးမြို့	185	Sandar Wai	07140145	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	မြင်းမူဈေးကွေ့၊မြင်းမူမြို့။	186	Shwe Sin	09400404081	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Myinmu (မြင်းမူ)	ရွှေဇင်စတိုးဆိုင်၊အာသောကရပ်၊မြင်းမူးမြို့	187	Thiri	09259671595	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Myinmu (မြင်းမူ)	မြင်းမူမြို့။	188	Tiger	09973955721	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ဆူလေးကုန်းရပ် ၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းဘေး ၊ မုံရွာ ။	189	ကံကော်ဖြူ	09262515379	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ပေ80လမ်း၊ဘုန်းစိုးရပ်၊မုံရွာမြို့။	190	ခိုင်သဇင်	0925611195	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	ဂွေးပင်တောရပ်၊ မြင်းမူမြို့။	191	ဇင်	07143021	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Myaung (မြောင်)	မြို့သစ်ရပ်၊မြောင်မြို့၊	192	ထွန်း (ရွာသစ်ကြီး)	09400478108	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ရွာသစ်ကြီး၊ရွာလယ်ရပ်၊ ဈေးတောင်ဘက်။စစ်ကိုင်း။	193	ထွန်း(1)	09400478108	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ရွှေဇင်ထွန်း၊ရွာလယ်ရပ်၊ရွာသစ်ကြီး။	194	ပွိုင့်	0940001394	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	မြို့သစ်ရပ်၊ညောင်ဦးမြို့၊ ချောင်းဦးပွိုင့် ၊ မုံရွာ ။	195	ပုလဲမေ	09250089208	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ကံကြီး၊န.မ.ခ တပ်နယ်၊မုံရွာမြို့	196	ဖူးငုံသွယ်	09792527341	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ပဲကတိုး၊စစ်ကိုင်းမြို့။	197	ဖူးသန့်ခိုင်	09402779939	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	ရွာထောင်၊စစ်ကိုင်း။	198	လွင်	09400405653	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	မုံရွာမြို့	199	သင်းရနံ့	07140444	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ညောင်ပင်ဝန်း	200	သင်းရနံ့	07140444	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	သင်းရနံ့စားသောက်ဆိုင်၊ညောင်ပင်ဝန်း။	201	သီရိ	09259671595	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	ထီးဆောင်းရွာ၊ မြင်းမူမြို့။	202	ကေသရာဇာ	09259791620	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ရုံးကြီးရပ်၊မုံရွာမြို့	203	ရွှေသရဖူ	09962131635	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	စိန်ပန်းနီလမ်း၊ နှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ဒေါင့် ၊ မြို့သစ်ရပ် ၊ မုံရွာမြို့။	204	ဟော်တယ်ချင်းတွင်း	07121938	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Chaung-U (ချောင်းဦး)	ကြီးရပ်၊မုံရွာ	205	မြင့်မိုရ်နန်း	092132650	Sagaing Division (စစ်ကိုင်း)	Monywa (မုံရွာ)	ကျောက်တောင်ရပ်၊အလုံ၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မုံရွာမြို့	206	ELEVEL STAR 09251005010	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	C-9/စစ်မှုထမ်းဟောင်းတိုက်တန်း၊အေးသာယာမြို့။	207	Elite Station Taung Gyi Aye Thayar Station	09977838315	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	အမှတ်(ခ/၄)၊ ယခင်ဗန္ဓုလဂိတ်ဟောင်း အေးသာယာအဝေးပြေးဝင်း၊ အေးသာယာမြို့၊ တောင်ကြီး။	208	Elite Station Taung Gyi Ho Pone	09977838187	Shan State (ရှမ်း)	Hopong (ဟိုပုံး)	အမှတ်(န-၁၉၇)၊ ဈေးသစ်လမ်း ၊ အနောက်ရပ်ကွက် ၊ ဟိုပုံးမြို့။	209	Elite Station Taung Gyi Thit Taw Station	09977838312	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	သစ်တောကုန်တင် ကားကြီးဝန်း၊ တောင်ကြီး-ဟိုပုံး ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။ 210	Full Moon Travel	09428371339	Shan State (ရှမ်း)	Nyaungshwe (ညောင်ရွှေ)	ရုံးကြီးလမ်းနှင့်ကျောင်းတော်အနောက်လမ်းထောင့်(တောင်ကြီး-ညောင်ရွှေကားဂိတ်တောင်ဘက်၊) မြို့လယ်ရပ်၊ညောင်ရွှေမြို့။	211	Thint Mate Swe	09421077471	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	အမှတ်(29) ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း ၊ ဓနသိဒ္ဓိ(2) ရပ်ကွက် ၊ ရွှေညောင်မြို့ ။	212	Tour Information Center (INLE VALLEY)	09428371348	Shan State (ရှမ်း)	Nyaungshwe (ညောင်ရွှေ)	KBZ ဘဏ်ရှေ့ ၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ညောင်ရွှေမြို့။	213	ကလောရွှေနန်းစံကားဂိတ် 09790671698	Shan State (ရှမ်း)	Kalaw (ကလော)	ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ၊ ကလောမြို့မဈေး ၊ စည်ပင်တိုက်တန်း ၊ ရှမ်းပြည်။	214	စိုးစန္ဒာ	09793354217	Shan State (ရှမ်း)	Lawksawk (ရပ်စောက်)	ရပ်စောက်လမ်းဆုံ၊သစ်တောတိုက်တန်း။	215	တင်တင်ထွေးလက်မှတ်အရောင်း	0936081894	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	နောင်လံရွာ၊တောင်ကြီးမြို့နယ်	216	ဦးအောင်လွင်+အန်တီချို လက်မှတ်အရောင်းဌာန	09794714921	Shan State (ရှမ်း)	Nyaungshwe (ညောင်ရွှေ)	ညောင်ရွှေလမ်းဆုံ၊ရွှေညောင်၊ဓနသိဒ္ဓိ(1)ရပ်ကွက်၊ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊အ	217	မောင်မောင်လက်မှတ်အရောင်း	09428225307	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	မြို့ပါတ်ဂိတ်မောချယ်ရီကားဝင်း၊စစ်စံထွန်းရပ်၊အမှတ်(218/219)တောင်ကြီး(က)	218	ရွှေဓနု	09770493008	Shan State (ရှမ်း)	Kalaw (ကလော)	ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ရပ်ကွက်(1)၊ ကလောမြို့။	219	ရွှေမင်းသမီး စတိုး	09254602864	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	C2 / မြို့မဈေး ၊ တောင်ကြီးမြို့ ။	220	အောင်ကားလတ်မှတ်အရောင်းဆိုင်	095210375	Shan State (ရှမ်း)	Kalaw (ကလော)	အမှတ်13-၊မင်းလမ်း၊ အလယ်ပိုင်း(1) ဟဲဟိုးဈေးရှေ့၊ ဟဲဟိုးမြို့။	221	မြင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း	09253932784	Shan State (ရှမ်း)	Taunggyi (တောင်ကြီး)	န/172 အနောက်ရပ်ကွက်၊ဟိုပုံးမြို့	222	1886	095135490	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	N0.361,pyay Road,San Chaung	223	A.A Oo Travels & Tours	09250044982	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	No 59B , Lanthit St,Nanthargone Qrt, Insein Township , Yangon.	224	ABC Covenience	09971667190	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	No(11),6 street,(8)Quater,South Okalar TspABC Covenience	225	Airtour Myanmar	09250022769	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	YuZaNa Hi Way Complex, Room 001, Building(C-1), Ground Floor,
Hinin Si Street 6th Quarter, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar	226	Allmyanmar Booking.com	095006233	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	အမှတ်(72)၊အထက်ပုစွန်တောင်လမ်းမကြီး၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ။	227	Amara Stars Travel & Tours	09968300581	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyauktada (ကျောက်တံတား)	No.4,UK Mart,West Wing,Bogyoke Aung San Market,Yangon.	228	AMT	123456	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	N0.36a,pyay Road,San Chaung	229	Arkar 08254022714	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	အမှတ်68/2 ၊ရွှေပြည်စိုးလမ်း၊ 14/2 ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာ။	230	ASP Aung Family Co.Ltd	09798443863	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	ဟံသာရိပ်မွန်၊တိုက် 2၊ အခန်း104 ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။	231	Aung Kyaw Moe	09450014996	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	အမှတ်(၂၁)ကျိုက်္ကဆံလမ်း၊ယာ(၃-၄)ထပ်။	232	Aung Myint Mo-2	095174033	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	အမှတ်(၁၇)၊စိတ္တသုခလမ်းနှင့်ကိစ္ဆာသယလမ်းထောင့်၊ကျောင်းမြောင်း။	233	Aung Thukha	095189625	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(267)ဆန်းသီရိလမ်းသွယ်၊(5/C)မြေနီကုန်းလမ်းဆုံ၊စမ်းချောင်း	234	Barons & Fujikura EPC Company Ltd 01667377	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	ကမ္ဘာအေးဗီလာ အိမ်ရာ ၊ တိုက် C-6 ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။
သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေူး ၊ တိုက်(127) ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။	235	Billion Coin	09262050083	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	အမှတ်(၈၁)၊မြေညီထပ်၊လှည်းတန်းလမ်းမကြီး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။	236	BVE INTERNATIONAL TRAVEL & TOUR Co.Ltd	094316389	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Latha (လသာ)	No 70(Ground Floor) . 21 Street . Lathar Township. Yangon, Myanmar . Contact No. 01254213, 09 43164389
Kabar Kyaw Food Mart, အမှတ်(၄၁)၊ မျက်နှာစာတန်း၊ သိမ်ကြီဈေး ဒီရုံ၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လသာမြို့နယ် ဖုန်း- ၀၉၄၄၈၀၀၆၇၄၅၊ ၀၉၅၀၃၁၈၀၅၊ 237	Canaan Shwe Pyi Co;ltd.	09259078589	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dala (ဒလ)	No.1246 ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွ	238	Channel T Travels & Tour	09450100880	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pabedan (ပန်းဘဲတန်း)	318/ A, Anawrahta Road, Ground Floor, Pabedan Township, Yangon, Myanmar. Ph: 09 450 100 880, 09 772 889 928	239	City Mark	09253382921	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thaketa (သာကေတ)	City Mark ( Head Office ) Tharketa	240	City Mart	09421113283	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။	241	CITY TICKETS	09979065943	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(18) ၊ ဟင်္သာတလမ်း၊ ကျွန်းတောရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	242	City to Cities 09250573304	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	အမှတ်(88) ၊ (CFL) , ၊91 လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။	243	CLICK	09420111858	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Bahan (ဗဟန်း)	No.20, Buliding 390 No.1 Industrial Road,Bahan ,Yangon. GA 35, Tower(C) , Pearl Condo , Bahan ,Yangon. No 5(D) Gabaaye Gamone Pwint Condo ,, Mayangone Yangon.	244	Convenience Store(ASW)	09123456	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	ပုလဲကွန်ဒို၊ Ayer Shwe Wah Co.,Ltd	245	D4	095025187	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Shwepyithar (ရွှေပြည်သာ)	31/218 ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ၀န်ထမ်းကြီးရပ်ကွက်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။	246	Dana Aung	0973116820	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ)	တိုက်(၁)၊အခန်း(၅)၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်၊ဇုံ(၄)လှိုင်သာယာ၊ ။
အင်းစိန်ရွာမမှတ်တိုင်။ဆင်မင်းလမ်း၊အလုံ။ရုံးကြီးလမ်းအိုးဘိုရပ်၊ကြည့်မြင့်တိုင်။(1)ဈေးရှေ၊့ဇင်္ဂမလမ်း၊သာကေတ၊ ရန်ကုန် ။
247	Diamond Heart Travel	09421054605	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	No/B , Sabei Street, 5WARD, Mayangone Tsp .	248	Dream Discovery Travel & Tours	09260945533	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	No553 Maoga Street> south Okkalapa Townshipn
booking@dreamdiscovery.com.sg	249	Easy Ticket	01543354	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	Deliver tickets to all townships of Yangon
Office: 1174, Thamadi Street, Myitta Nyunt Tsp.,Yangon.
Hotline : 09-554 5454, 01-543354	250	Elite Station Aung San	09977838411	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	အခန်းအမှတ် (၄) ၊ အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်ခြမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။ (ရိုးမဘဏ်နှင့်ကပ်လျက် )	251	Elite Station Aungmingalar	09977838322	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	အခန်းအမှတ် ယ ၅/၆/၇/၈ စစ်ကိုင်းလမ်းနှင့် မိတ္ထီလာလမ်းကြား ၊ ယာဉ်ရပ်နားကွင်း (၃)၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဝင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။	252	Elite Station Mindama	09977838633	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	အမှတ် (၁၀) ရွှေကမ္ဘာအဆင့်မြင့်အိမ်ယာ၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း နှင့် မင်းဓမ္မလမ်းထောင့် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ (ဧရာဝတီဘဏ် နှင့် Terminal ဆီဆိုင်ကြား)	253	Elite Teach	0973116767	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	No(54) Shwe Kabar MinDama Street	254	Exotic Myanmar	095036476	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyauktada (ကျောက်တံတား)	(15)floor,Bo Aung Kyaw Tower . Yangon .	255	Family Mini Mart	09254202588	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Lanmadaw (လမ်းမတော်)	အမှတ်(၅၅)၁၃လမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ် ။	256	Fascino	09423682953	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pabedan (ပန်းဘဲတန်း)	85/87 ဗိုလ်ဆွန်ပတ်အောက်လမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။	257	Focus Job Mart Agency	09421049387	Yangon Division (ရန်ကုန်)	North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ)	တိုက်အမှတ်(4) အခန်း(305) ၊(4)လွှာ၊အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ။	258	FOUR COLOUR TRAVEL	0973054520	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	တိုက် 11 ၊ အခန်း2၊ ဘော်ဇင် လမ်း၊ 24 ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏမြို့ ၊ သင်္ယန်းကျွန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန် ။	259	Gandawin	095122981	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	တိုက်(၇၇)၊လှည်းတန်းလမ်း၊ တာလီရွှေဆိုင်ဘေး ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ။	260	Global links Asia Myanmar Co.Ltd	09975051743	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(37/အေ) မြေညီထပ်၊ှဆီဆုံလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။	261	Global Myanmar Glory ( GMG )	095019002	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Ahlone (အလုံ)	C-8,201,Thirimingalar Garden Hlaing Ahlone .	262	Golden Express Tour	09250013173	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Lanmadaw (လမ်းမတော်)	အမှတ်(B/97)၀ါးတန်းလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	263	Good To Go	09450062389	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	Building (17),2nd floor,MICT Park,Hlaing Campus & Township,Yangon	264	Green Myanmar Travel & Tours(BNF Express)	09969910104	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	391, Waizayantar Road, Thingangyun Township, Yangon.	265	Green Ticket	0943080638	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	Room(B/40),Building 4,MICT Park.	266	Green Wood Tourism Co.Ltd	095105050	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အခန်း(1003)၊10လွှာ ၊ပန်းခြံတာဝါ၊ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့်ဗားကရာလမ်းထောင့်၊မြေနီကုန်း၊စမ်းချောင်း။	267	HOLA HOLA Travels & Tours	09254504203	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pazundaung (ပုဇွန်တောင်)	No(90),Myaung Gyi Street,Paunday Tsp,Yangon.	268	Horizon	09972353543	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်)	No(182)(ground floor),45 street,Botataung Tsp .	269	Htet Aung Shine	095110173	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	အမှတ်(၁၃)၊သြဘာလမ်း၊သီတာမှတ်တိုင်အနီး၊တာမွေ။	270	Htoo Myat Eain 0943084226	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	အမှတ်(116)၊အင်းစိန်လမ်းမ၊သုခမှတ်တိုင်၊(9)ရပ်ကွက်။လှိုင်မြို့နယ်၊	271	I.B.P	09420043342	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	အမှတ်(23)ခ၊ အောင်စည်းခုံဘုရားလမ်း၊ ကျောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။	272	Ignite Myanmar Travel and Tour	097777698366	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	အမှတ်(120) မြေတိုင်း (3) ၊ကန့်ကော်(2) လမ်း ၊ဇေကမ္ဘာဥယျဉ်မြို့တော်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။	273	JADE CASTLE 09250484822	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon (ဒဂုံ)	No 26(B) , Room (3) ,Yaw Min Gyi Street , Dagon Township , Yangon.	274	Ka Thit Pan	095171632	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	No.269/270,Thitsar Street,( 10 ) Block,South Okkalapa.	275	Kaung Myat Lin	09254087772	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ)	Condo L.7 ကန်သာယာလမ်း၊FMI City , Yangon .	276	Khwar Nyo Travel & Tour 095191672	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Bahan (ဗဟန်း)	အမှတ်(26).130Min Kyaung Street. Bo Sein Hmun Quarter ,Yangon Bahan.	277	KMW	095051912	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	အမှတ်(၉၆)၊/4B၊ က္ကုစ္ဆာသယလမ်း၊ကျောက်မြောင်း၊တာမွေ။	278	Ko Kyaw Lwin	0973035621	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	အမှတ်(၂၅၀)၊အင်းစိန်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊လှိုင်မြို့နယ်။	279	Ko Shay Gyi	0973901252	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	လမ်း၃၀အောက်လမ်း ၊ အမှတ်(၅၆)၆ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန် ။	280	Ko Tun Phay	0943189831	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Bahan (ဗဟန်း)	18/39 Damaparla Road,Sayarsan Tsp,Bahan .	281	Kyauk Sein	09421026323	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	၁၃ရပ်ကွက်လှိုင်၊ အုတ်ကျင်း၊ အင်းစိန် ရန်ကုန် ။ 282	La Min Thar	01372660	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyauktada (ကျောက်တံတား)	အမှတ်-၃၄၂/၃၄၆၊မြေညီထပ်၊ မဟာဗန္ဒူလလမ်းနှင့် ၃၉ လမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဆက်သွယ်ရန်. 01372660, 0973078085, 095106144	283	Lannar Ticketing	09785608725	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	B 146 , မုဒိတာ2ရပ်ကွက် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။
အမှတ်(100) ၊ခ၀ဲခြံ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၊3ရပ်ကွက် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။	284	Let's go	0943042170	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(5) ၊စမ်းချောင်းလမ်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊။ရန်ကုန်။	285	Lucky Trip-Bus Online Tickets	09425350431	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	အမှတ် (7-အေ) ၊ကျောင်းကုန်း(1) လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။	286	Lwin Kham Family Travel & Tourr	09425015909	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	အမှတ်(888)၊34ရပ်ကွက်၊ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ။	287	M-Link Travel & Tour	09262347399	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	D(2) A, သဇင်(2) လမ်း၊လှိုင်ရတနာလုံးချင်းအိမ်ရာ၊လှိုင်မြို့နယ်။	288	Ma Nge Lay	095148877	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	အမှတ်(6/6)ဒညင်းကုံးလမ်းဆုံ၊အင်းစိန်။	289	Ma Zin Min (Parel)	095091975	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	ပုလဲ(၁)ပြည့်ဖြိုးလျှံဆိုင်ခန်း၊ရခိုင်ကျောင်း။	290	Maw (LT)	095340518	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီး၊ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊အင်းစိန်လမ်းမဖက် ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။	291	Maw Shwe Gangaw(AS Maw)	0973191609	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်ခြမ်း၊ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရှေ့၊ဂန္ဓမာကုမ္ပဏီဘေး။	292	Min Travel & Tour	09448537260	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	112Laydaungkan Road Thingangyun	293	MKM	095021895	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	F(5)ပထမထပ် Jouction(8) . Yangon .	294	MS Myanmar Travels @ Tours	095073717	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pazundaung (ပုဇွန်တောင်)	183 ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊	295	Mya Mandalay Travels & Tours	09785035104	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(10) ချမ်းသာလမ်း ၊ ရွှေလ၀န်းလမ်းထောင့် ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(201) အခန်း(1) ၊ ရန်ရှင်းလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ။	296	Myanmar Nine Elephant	09250222979	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Yankin (ရန်ကင်း)	No(230),Thitsar Road,13Quater,Yankin Township.	297	Myanmar Travelogue Travel & Tour	0943113998	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်)	အမှတ်(64) မြေညီထပ်၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။	298	Myat Thiha	0943070718	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	(1)အမှတ်(စ/၄၃၀)၊(၆)ရပ်ကွက်၊ဇေယျာခေမာလမ်း၊(၈)မိုင်။ (2) ကွမ်းခြံလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ဖဆပလ။	299	Myat Yadana(Ygn)	095167707	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thaketa (သာကေတ)	အမှတ်(401) သုမန(3)လမ်း 5/တောင်ရပ်ကွက်၊သာကေတ။	300	Nice Fare	09777772351	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	No.5 GoePhyu Rd, Mingalar Taung Nyunt T.s, Yangon	301	Nice Style	09799700099	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	No355,Room(105),Shine Condo,Theinphyu Road,Mingalar Taung Nyunt Tsp,Yangon	302	Nice Win Car Rental Service	095145514	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - South (ဒဂုံမြို့သစ် - တောင်)	No (11/A) မြိတ် လမ်းသစ်၊ အင်းဝအိမ်ယာ၊ တောင်ဒဂုံမြိုနယ် ။	303	Pan Thu Kha Travels & Tours Co;Ltd.	095095586	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	43,ဒုထပ်၊မကြီးကြီးလမ်း၊စမ်းချောင်း၊ရန်ကုန်	304	Phyo Mobile Sale & Service	095108014	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	အမှတ် (1519) ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ 46 ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဒဂုံ ။	305	Pyae Chan Thar	095406621	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	အမှတ်(၃၀၂) ၊ တိုက်(၆) ၊အေးရ်ိပ်မွန်(၉)လမ်း၊၅ရပ်ကွက်၊လှိုင် ။	306	Pyi Thar	095025418	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	လှိုင်မြစ်လမ်း၊အင်းစိန်(ထောင်ဗူးဝရှေ့)။	307	R.G 09250462992	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	53 သတိပဌာန်လမ်း၊ကျောက်မြောင်း၊တာမွေ။	308	Red Link	9422533925	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	Red Link Communication Co.,Ltd. MICT Park	309	Red Travels & Tours	099967858226	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hmawbi (မှော်ဘီ)	ကြို့ကုန်း။	310	RIGEL Training & Consultancy	09974446841	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	အမှတ်(29) အေ၊ ဇေယျာ သီရိလမ်း၊ လှည်းတန်း။ Online ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ရန် CB, AYAR, KBZ, OK $ စသည့် ၀န်ဆောင်မှုများအသုံးပြု ၍ ပေးချေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်စုံစမ်းရန် 09974446841	311	Rose Travels & Tours	09775665958	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dawbon (ဒေါပုံ)	Dawbon, Yangon.	312	Royal Dream Company Travel & Tour	09254505544	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(23) ၊မဟာဘောဂလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။	313	Royal KPM Travels @ Tours Co.,Ltd	09771851432	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	No 39၊ ဗဟိုလမ်း(ဇေယျဝတီလမ်း၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်။	314	Royal White Rose Co.Ltd	09799997041	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	NO.10 , Room 10, Wailuwon Housing , Sanchaung , Yangon.	315	Sakar War	09798145205	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thaketa (သာကေတ)	အမှတ်(၉၅၇)ရန်ပြေ(၄)လမ်း၊အရှေ့ ၂/တောင် သာကေတ	316	Sein Htay	09420075619	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thaketa (သာကေတ)	No(475) (23 Street,2 North Tharkaytha	317	Shar Bayin	73104650	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thaketa (သာကေတ)	အမှတ်(၆၅)န၀ရတ်(၁၁)လမ်း၊၈ရပ်ကွက်၊သာကေတမြို့နယ်	318	Shine	0973054336	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	၆၈ သမာဒိဌိလမ်းကျောက်မြောင်း၊တာမွေ	319	Shwe	095027054	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	အမှတ်(၂၂)၊ကွမ်းခြံလမ်း၊အောင်ဆန်းကွင်း၊ဘူတာကြီးရှေ့။မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။	320	Shwe Kaung Kin	09421086217	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	အမှတ်(၄/၅)အ.လ.က(၄)မင်္ဂလာဒုံကျောင်းရှေ့၊ပြည်လမ်း။	321	Shwe Phyi Thit	095045177	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Lanmadaw (လမ်းမတော်)	အခန်း(၉)ရပ်ကွက်၊၈ဗဟိုလမ်း၊ (အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးဘေး) လမ်းမတော်မြို့နယ်။ အမှတ် 123 အောက်ကြည်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။
အမှတ် 148 ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
တိုက် (1) အင်းစိန်လမ်းမ၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
အမှတ် (7) ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 322	Shwe Thiha	09450003073	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	ညောင်တုန်းလမ်းထိပ်၊အ.ထ.က.(၄)ကျောင်းရှေ့၊စမ်းချောင်း။	323	Shwe Zin	095407441	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	တိုက်(A/3)အမှတ်(304)ဇောတိကအိမ်ယာ၊ခပ်ချီးယားမှတ်တိုင်၊သင်္ဃန်းကျွန်း။(0943140405) ။
အမှတ်(12/16) ၊ကွမ်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်၊ (095043846)
ဂွတ္တလစ်၊ အမှတ်(27) ၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်။
ဘုရင့်နောင်၊သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း နှင့် တပင်ရွှေထီးလမ်းဒေါင့် ၊ (0973171499) ။
ဒဂုံတောင်၊ အမှတ်(136/2) ၊ယောက်ကော်မှတ်တိုင်အနီး၊ ကတန်ကျွန်းလမ်း။ (01-8100431)။	324	SK General Services	09785030490	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pabedan (ပန်းဘဲတန်း)	အမှတ်(၇၁)/၃၊ရွှေဘုံသာအောက်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်	325	SM Travels & Tour	09799458265	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyeemyindaing (ကြည့်မြင်တိုင်)	Thayat Taw 5th Street, Thayat Taw South Qtr, Kyae Myin Taing Tsp, Yangon,	326	Star Ticket	095208455	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Lanmadaw (လမ်းမတော်)	အမှတ်(54) ၊ လမ်သစ်လမ်း၊ ပထမထပ်၊ ၊လမ်းမတော်။	327	Su Le Thwe	09254049449	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်)	အမှတ်(၁၁)ဗိုလ်တထောင်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ။	328	Super Sein	09420060141	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	မွအ၀ိုင်းထိပ် မီးပွိုင့်အနီး၊ဗဟန်း	329	Swan Star Tour Co.Ltd & Trading	0973135482	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	22 မြို့သစ် ၂ လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊တာမွေမြို့နယ်၊လျှပ်စစ်ရုံးမီတာဘီလ်ရုံအရှေ့။	330	Sweet Traveller	09795683107	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pazundaung (ပုဇွန်တောင်)	Puzutaung.	331	T& Y Travel & Tour	09459277599	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	မြောက်ဒဂုံ ။	332	Teak&Travels	095017615	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	No(2)Khit tha Road,Thiri Kaymar San Chaung	333	The Backyard	09451365695	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	348၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊	334	Thein Htike Thu	095062134	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	အမှတ်(1)ထောက်ကြံရတနာဈေးရှေ့၊ လမ်းဆုံ ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမဘေး။	335	Thit San	09962568343	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	တိုက်(၂၁)၊ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊(၉)ရပ်ကွက်၊ဘူတာရုံလမ်း၊လှိုင်မြို့နယ်/	336	Toly Moly	09799770742	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(9) ၊ ဇလွန်လမ်းစမ်းချောင်း၊။	337	Top Crest Co.Ltd	095404679	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - Seikkan (ဒဂုံမြို့သစ် - ဆိပ်ကမ်း)	တိုက်(21)၊အခန်း(003)5လမ်း၊ယုဇနဂါးဒင်းလ်၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။	338	Travel City Travels & Tours Co.Ltd	09253822747	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyeemyindaing (ကြည့်မြင်တိုင်)	အမှတ်(34) ပထမထပ်၊ အုန်းပင်လမ်း၊ ကြည်မြင်တိုင်။	339	Trumpet Travel(Minnovation Co.Ltd)	0943089536	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	Pa-3,Padonmar Street Sanchaung Township.Yangon.	340	UK Travel & Tour	09799132352	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	လမ်းသစ်ထိပ်၊ထောက်ကြန့်၊ ရန်ကုန်။	341	Unique Asia Travels & Tours Co.,Ltd	095402525	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyauktada (ကျောက်တံတား)	No.152 , Sule Pagoda Road, Yangon.	342	Virtual Wave	09254411653	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	အမှတ်(၁၅)။ဂျုဗလီလမ်း၊တောင်သူကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်။	343	Wyp Bagan Travels & Tours	0949291345	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	အမှတ် ၂၇၁၊ ၁၃ လမ်း၊ ငွေကြာယံ (၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ဝေဇန္တယာလမ်း နှင့် သစ္စာလမ်းထောင့် အနီး(ဗဟိုဈေးမှတ်တိုင် အနီး)	344	Yadana Win T and T	09264003676	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	POL	345	Yamone Nar	0930098146	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Insein (အင်းစိန်)	အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ သမိုင်းလမ်းဆုံ၊ ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ။	346	Yin Hninn Kay 0973131753	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	ဆောင်းဟေမာန်အိမ်ယာ၊(30)ရပ်ကွက်။	347	Zwe Nyi Naung Travels	09450025613	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - South (ဒဂုံမြို့သစ် - တောင်)	အမှတ် (507) ၊ ယုဇနလမ်း ၊ 25 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံတောင်ပိုင်းမြို့သစ် ၊ ရန်ကုန် ။	348	ချမ်းသာကားလတ်မှတ်အရောင်းဆိုင်	095068963	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	85/86 ၊ အခန်း 20 ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။	349	စုမြတ်အောင်	09799562429	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	723 / A(1) မလိခအိမ်ယာဥယျဉ်လမ်း၊ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။	350	ဇ၀န	09420029713	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	ဇ၀နမှတ်တိုင်၊City Mart အနီး၊လေးထောင့်ကန်လမ်းမ၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။	351	ဓနမိုး ခရီးသွားကုမ္ဗဏီလီမိတက်	095559666	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pabedan (ပန်းဘဲတန်း)	32လမ်း၊ Central Hotel မြေညီထပ် ၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန် ။	352	န၀ရတ်	09974011122	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ)	အမှတ် (167 ) တောင်ငူလမ်း ၊ 1 ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန် ။	353	ပစ်တိုင်းထောင် (Money Changer နှင့် ကားလတ်မှတ် အရောင်းဆိုင်) 09777843384	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kamaryut (ကမာရွတ်)	169 မြေညီထပ် ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမ ၊ ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင် ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန် ။	354	ပစ်တိုင်းထောင် (မှော်ဘီ) 09790141250	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hmawbi (မှော်ဘီ)	နီနီစတိုး ၊ ပြည်လမ်း ၊ ကိုးလုံးကွင်း ၊ မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်။
မြောင်းတကာ၊ မှော်ဘီ ။ ဆတ်သွားတော ၊မှော်ဘီ ။	355	ဗိုလ်ဆွန်ပက်	09425026132	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Pabedan (ပန်းဘဲတန်း)	အမှတ်(၂၉၂) ၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်) ၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	356	မင်္ဂလာ လတ်မှတ်အရောင်းဌာန	09420041768	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	အမှတ် (26/B) ၊ သံလမ်း (7) ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ် ။	357	မဟာနွယ်	09785127327	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	အမှတ်(48) ဓမ္မရာဇာ2လမ်း၊ 10ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ။	358	မာန်အောင်သစ္စာ	095060875	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thaketa (သာကေတ)	127/13 ၊ မြေညီထပ်၊အနော်မာ(17)လမ်း၊2/မြောက်ရပ်ကွက်၊သာကေတ	359	မိဘဂုဏ်ရည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း	09977838151	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mayangone (မရမ်းကုန်း)	No.(95/C),Manaw Harri Street, Ward (1),Mayangone Township	360	မိုး (မင်္ဂလာဈေး ) 0973017288	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	အမှတ် (46) ၊ 118 လမ်း၊ မင်္ဂလာဈေး ၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။	361	မိုးကောင်းကင်	095396118	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	18/55 ၊စံပြဖဆပလ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ ၊ ရန်ကုန်။	362	မိုးပြည်စုံ	09420016733	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	အမှတ်(9) ၊အောင်သပြေလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။	363	ရန်ကင်း	09250017096	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Yankin (ရန်ကင်း)	အခန်း(1) ၊တိုက်(15) ၊၁ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။	364	လင်းဇော်မိုး ခရီးသွားလုပ်ငန်း	09421015610	Yangon Division (ရန်ကုန်)	North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ)	(၁) အမှတ်(78) ၊ပါရမီလမ်း၊ ဝေဘာဂီမြိုသစ် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ။
(2) အမှတ် ၁၀၂၂(B)၊ ဒုတိယထပ်၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊	365	သစ္စာရပ်ဝန်း	09250085170	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyauktada (ကျောက်တံတား)	အမှတ် (4 ) ၊ ဆူးလေ ဘုရားအ၀ိုင်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။	366	သဇင်မိုး	09423683798	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)	ဖဆပလရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။	367	သဟာဆွေ	09421178996	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - South (ဒဂုံမြို့သစ် - တောင်)	အမှတ် 124 ၊ မောင်းမကန်ကမ်းသာယာလမ်း ၊ (20) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ် ၊ရန်ကုန် ။	368	သိန်းသန်းအောင်	0975156693	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	51 ၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။	369	သွန်း & ယွန်း	09777370747	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Sanchaung (စမ်းချောင်း)	တိုက်(22) ၀ါးခယ်မလမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။	370	ဦးမြင့်သိန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း	09449591776	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	အမှတ်(124) ၊ စံပယ်ခြံ (2) လမ်း၊ 11 ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ် ။
Online ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ရန် CB, AYAR, KBZ, OK $ စသည့် ၀န်ဆောင်မှုများအသုံးပြု ၍ ပေးချေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်စုံစမ်းရန် 09425014671, 09780458921, 01 514188	371	ဧကရာဇ်	0943207280	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	အမှတ်(812)၊သံသုမာလမ်း၊ 13 ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။	372	ကောင်းမြန်မာ	09450040409	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	အမှတ်(1273)၊ အနော်ရထာလမ်း၊46 ရပ်ကွက်၊50ကွေ့မှတ်တိုင်၊မြောက်ဒဂုံ။	373	ကျောင်းလမ်း	09250142864	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Dagon Myothit - North (ဒဂုံမြို့သစ် - မြောက်)	အမှတ်(799)၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊35ရက်ကွက်၊မ/ဒဂုံ။	374	ကျော်ဇောလင်း	092522798330943140407	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	တောင်ဥက္ကလာ၊ဘုရားရှေ့အနီး။	375	ငွေကြယ်စင်	09254077770	Yangon Division (ရန်ကုန်)	North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ)	392/သုမိဏ္ဏ(10)လမ်း၊1ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကာလာ။	376	ဒေါ်ကြည်(စတိုး)	09777888456	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Latha (လသာ)	အမှတ်(63)၊ 21 လမ်း၊ လသာမြို့နယ်။	377	ရွှေခရီးစဉ်	095070797	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Kyauktada (ကျောက်တံတား)	အမှတ်337 ၊မဟာဗန္ဓူလလမ်း နှင့် လမ်း 40 ထောင့်၊ကျေက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။	378	ရွှေမင်္ဂလာ	095411281	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Hlaing (လှိုင်)	အမှတ်144/ ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်၊အင်းစိန်လမ်းမ။ ရန်ကုန် ။	379	ရွှေအုန်းပင်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း	0973007424	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Bahan (ဗဟန်း)	ဗိုလ်ထွန်းလင်းလမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်မှတ်တိုင်။ဗဟန်းမြို့။	380	ရွှေမြင့်မိုရ်	0973128577	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ)	အမှတ်(3) လမ်းဆုံ - မထသ ဂိတ် အနီ၊ ထောက်ကြန့်မြို့ ။	381	ရွှေမြန်မာ 09262222636	Yangon Division (ရန်ကုန်)	South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)	အမှတ်(316) ၊ သီလ(10)လမ်း ၊ (4) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။	382	သော်တာဝင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း	09252497355	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Tamwe (တာမွေ)	331, ဗညားဒလလမ်း၊အရိုးကုန်းရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်။	383	အောင် လက်ဖက် နှင့် ပဲကြော်စုံ ရောင်းဝယ်ရေး	09450391941	Yangon Division (ရန်ကုန်)	43 / 44 (6) ရုံမြင်သာဈေး ၊တောင်ဥက္ကလာ။ ရန်ကုန် ။	384	အောင်မြင်သူ	09450013197	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	အမှတ်(2) မြေညီ၊ အောင်ဇေယျ(1) လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်။ 385	မြတ်သဉ္ဖာ အဆင့်မြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း	095038228	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Bahan (ဗဟန်း)	ဒုတိယထပ်၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ တိုက်(စီ) ၊သုံးထပ်ဆောင်၊ဗဟန်းမြို့နယ်။	386	၀သာန်	09254310039	Yangon Division (ရန်ကုန်)	Thingangkuun (သင်္ဃန်းကျွန်း)	22/54 ၊ မလိခအိမ်ယာ ၊ ဘ၀မြှင့်ရပ်ကွက် ၊ သင်္ယန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်။	Copyright © 2015 All Rights Reserved. MSCT Co.Ltd